Google dia afaka nandefa ny fampiharana ho an'ny Windows 10 | Androidsis
Teo anelanelan'ny Microsoft sy Google dia nahita a fifankatiavana fitiavana fankahalana, izay tato ho ato dia mifanaraka amin'ny mety ho vady aman-draharaha noho izay antsoina hoe "misy poizina" izay mazàna ny fifanakalozan-kevitra sy ny tsy fitovian-kevitra no sakafontsika isan'andro. Ity fitiavana voalaza eo amin'ny roa ity dia tonga indrindra aorian'ny tapitra ny ady amin'ny patanty izay samy nanana ny fotoanany ary ny fomban'ny Microsoft momba ny Android handefa ireo karazana fampiharana rehetra.
Ary ao anatin'ny ora maromaro aorian'ny hetsika iray izay hanoloran'i Microsoft fitaovana vaovao marobe toa ny Lumia vaovao roa, dia mipoitra ny tsaho momba ny fomba mety hitondran'i Google ny fampiharana anao mankany Windows 10. Ary tsy ho fampiharana amin'ny alàlan'ny tranonkala izy ireo, fa fampiharana iraisampirenena izay azon'ny mpampiasa sintonina avy amin'ny PC-nao mba hidirany amin'ny serivisy Google ananan'izy ireo amin'ny finday Android na takelaka misy azy. Izy io koa dia maneho vanim-potoana vaovao na vanim-potoana fiaraha-miasa eo amin'ireo mpamokatra lehibe indrindra toa an'i Microsoft, Google ary Apple.
2 Rivotra miova
Efa nolazaiko tamin'ny fotoana maromaro izany, toy ny fanaontsika matetika mifandray amin'ny fitaovana samihafa Amin'ireo rafitra sy mpamokatra isan-karazany, ity farany dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny fiaraha-miasa mba tsy hanelingelina ny zavatra niainan'ny mpampiasa, iza no amin'ny farany izay manala ny poketra ary mandany ny euro amin'ny fividianana rindrambaiko sy fitaovana.
Fiovana lehibe io, satria hitantsika ny fomba nanopy ny masony izy tamin'io ady momba ny patanty io izay nifarana tamin'ny herinandro lasa teo raha teo am-pelatananay ny vaovao momba ny nanasonian'ny Microsoft sy Google ny fantsom-pilaminana mba tsy hifankahala intsony.
Ary tsy eto ihany io, fa efa fantatsika ny fandavan'ny Google an'ny Tohano ny fampiharana anao amin'ny sehatra Microsoft, ary ny fomba nanakanany ny fampiharana YouTube tamin'izany fotoana izany mba tsy hampiasaina amin'ny Windows Phone. Ka izany rehetra izany no mila ampiasain'ny mpampiasa rehetra mampiasa rindranasan-tranonkala raha hanao izany.
Ny fiovan'ny toe-tsaina dia avy amin'i Microsoft ao paikady vaovao hampanakaiky kokoa ny rindrambaiko ataon'izy ireo amin'ireo sehatr'asa na fivarotana virtoaly samy hafa mba hahafahan'ny mpampiasa "" voafandrika "avy amin'ny birao malaza toy ny Office, na ireo fampiharana Android vaovao izay manomboka amin'ireo mpandefa fampiharana hahamarika ireo mpitantana. Izany rehetra izany dia manana kalitao tena tsara, izay nanamafy ny fahalalan'ilay rindrambaiko ny fomba fiasa hanomezana traikefa ho an'ireo mpampiasa mandalo alohan'ny fampiharana azy ireo.
Ary tsy io fiovan'ny toe-tsaina avy amin'ny Microsoft io ihany no nitranga tamin'ny alàlan'ny fampiharana azy, fa izy ireo koa dia efa manatrika hetsika Apple hampiseho ny efitrano fiasan'ny Office anao.
Ka io vaovao tamin'ny herinandro lasa io dia mety hanana zavatra betsaka kokoa noho ny tamin'ny voalohany izay mety ho toa ny fitsaharan'ny fifandrafiana teo amin'i Google sy Microsoft. Ny fanombohana ny fampiharana Google ho an'ny Windows 10 dia midika fa mety ho izy ireo napetraka ao amin'ny Xbox One sy Windows 10 Mobile, izay mety hitarika mpampiasa sasany hivadika Lumia vaovao miaraka amin'ny fitaovana avo lenta, ankoatry ny fisian'ireo mpampiasa an-tapitrisany miara-monina amin'ny Windows 10 sy Android. Tombony ho an'ny rehetra, na dia iza no mahalala, mety hiverina ny fifandrafiana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google dia afaka nitondra ny fampiharana azy tany amin'ny Windows 10 ihany tamin'ny farany